Lalàn’ny fifidianana filoham-pirenena : Tsy afaka hirotsaka ireo kandida maloto -
AccueilRaharaham-pirenenaLalàn’ny fifidianana filoham-pirenena : Tsy afaka hirotsaka ireo kandida maloto
23/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nivoaka nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly ny fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana ho an’ ireo parlemanta roa tonta dia ny solombavambahoaka sy ny loholona izany, izay hanomboka ny alatsinainy faha-26 ny volana febroary ho avy izao. Lalàna telo no hodinihina amin’ izany, dia eo ny lalàna mahakasika ny fifidianana iray manontolo sy ny fitsapan-kevi-bahoaka, ny lalàna mifehy ny fifidianana solombavambahoaka, ary ny lalàna mifehy ny fifidianana filoham-pirenena. Araka ny fanadihadiana izay notanterahina dia efa tonga eny anivon’ireo andrim-panjakana roa t onta avokoa ireo volavolan-dalàna ireo, ary mandritra ny folo andro no handinihina izany. Raha ny mikasika ny volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana filoham-pirenena dia takiana anatin’izany lalàna izany ny fahadiovan’ny olona hirotsaka hitondra ny firenena. Voalaza mantsy anatin’ny andininy faha-14 ao amin’ny fizarana faharoa mikasika ny fandraisana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana fa “ ny filohan’ny fisatrana avo momban’ny lalàm-panorenana dia tsy maintsy mangataka ny bileta laharana faharoa amin’ ny “ casier judiciaire “ eny amin’ ny fampanoavana, ary izany dia tokony hivoaka efatra amby roapolo ora aorian’ny fangatahana”. Ity antsoina hoe bileta laharana faharoa ity moa dia ny antsipirihin’ ny fahadiovan’ ny olona iray, ary ny bileta laharana fahatelo kosa dia ilay ampahany amin’ny bileta laharana faha- 2. Mazava ihany koa anatin’ny lalàm-panorenana fa tsy afaka ny hilatsaka velively ireo voampanga nanodinkodina fananam-bahoaka, vonoan’olona sns….
Mikasika kosa indray ny fahafahana milatsaka hofidiana dia tapitra hatreo izany ireo olon-tokana milatsadatsa-poana amin’ ny anarany manokana, mazava rahateo ny voalazan’ny andininy faha-7 mikasika ny fahafahana mirotsaka “ ireo rehetra izay maniry ny hirotsaka hofidiana amin’ny fifidianana filoham-pirenena, dia tokony hivoaka avy amin’ny antoko politika izay ara-dalàna ny fitsanganany, na ihany koa avy amin’ ny vondrona politika manana izay taratasy ara-dalàna amin’ny fisiany izay ihany, na ihany koa atolotr’ireo olomboafidy miisa 150 izay mambran’ ny sénat, antenimieram-pirenena, mpanolotsaina monisipaly, faritany sy rezionaly, ben’ny tanàna, lehiben’ny faritra, lehiben’ ny faritany izay ahitana faritra telo farafaharatsiny. Tsy anisan’ireo izay afaka manolotra ho kandida kosa ireo olona izay notendrena tamina toerana ambony, ankoatra ireo izay notendrena ho senatera. Ireo antoko na vondrona antoko kosa dia tsy afaka hanolotra afa-tsy kandida iray ihany, raha tsy hoe nolavina angaha ny kandida izay natolotr’izy ireo. Ary toraka izany ihany koa ireo izay hanolotra kandida tsy miankina. Marihina moa fa takiana mandritra ny fametrahana atontan- taratasy ny lisitr’ireo olona izay nanolotra kandida ireo.
Araka ny fantatra mikasika ny volavolan-dalàn’ny fifidianana izay mbola ho avy eny amin’ ny antenimieram-pirenena, dia mbola tsy taratra anatin’ izany ny mikasika ny vola izay ho alohan’ ireo kandida amin’ izay filatsahana izay. raha tsiahivina mantsy ny teo aloha dia mitentina 50 000 000 ar izany, saingy mbola tsy hita taratra kosa ny mikasika ity vola izay ho aloan’ ny kandida hirotsaka ity. Raha ny fanadihadiana mikasika ny lalàn’ny fifidianana ity ihany dia mety ho bileta tokana no ampiasaina amin’ ireo fifidianana rehetra ankoatra ny fifidianana filoham-pirenena, araka ny voarakitra anatin’ny andininy faha-120 anatin’ ny volavolan-dalàna hifehy ny fifidianana. Midika izany fa arakaraka ireo izay vola miala amin’ny fanomanana no hamoaka ny vola izay ho antoka ataon’ ireo kandida, mbola taratra anatin’ny lalàna kosa moa ny famerenana ny vola ho an’ ireo kandida izay mahazo ny folo isan-jato.